Ihe ： Carbon nchara, igwe anaghị agba nchara
Pịnye ： Nzọụkwụ mbụ nzacha
Structure: magnetik ala
Nọmba nlereanya XYCF
Ndị na-abụghị ọkọlọtọ arịrịọ ndị ahịa
Nke a igwe na-tumadi etinyere maka obi jụrụ mmiri, ịcha mmanụ ọcha usoro nke egweri akụrụngwa na ndị ọzọ igwe tool.It amịkọrọ obere ígwè ájá na attaching adịghị n'ime jụrụ mmiri mmiri (mmanụ) site magnetik drum nke separator.It nwere ike belata mgbazi oge nke gringing wheel, ịgbatị ọrụ ndụ nke egbutusị, ebelata dochie oge nke jụrụ mmiri mmiri, ma belata osisi ike nke rụọ na gburugburu ebe obibi mmetọ nke siwage.It bụ ihe dị mkpa fuctional akụkụ nke egweri igwe ngwá ọrụ na ndị ọzọ ọnwụ akụrụngwa.
1.Compact sizt, arụ ọrụ siri ike, mkpọtụ dị ala, obere ike oriri.
2.Discharge ibe quantitatively, dịghị overloading ..
3. Enwere ike ịmepụta ya dịka ohere akọwapụtara nke akụrụngwa igwe.
Etiti Ofdị ọrụ Ntụziaka / nkwupụta nchedo
Epepu akwa Izu 1 Nhicha Enwere ike ịgbatị oge ma ọ bụ dị mkpụmkpụ, dabere na ngwakọta nke ihapu
Ọnwa 3 Lelee maka ejiji na mmebi, mezie N'ihe banyere ike ike ma ọ bụ mmebi, dochie.
Ngwongwo na-akwọ ụgbọala Ọnwa 3 Lelee erughị ala ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ikesiike, mmanụ. Naanị maka nsụgharị na ịkwọ ụgbọala.
Akpa na mgbakọ sooks. Ọnwa isii Lelee maka mmachi, corrosion na mmebi. Ihe ndị na-emebi gburugburu ebe obibi nwere ike ghara ịbanye n'ime ọnọdụ ọ bụla.
Gear moto ---- Hụ ntuziaka ntuziaka
Antifriction amị ---- Mmezi-n'efu
Coolant tankị. Oge ọrụ 500 Lelee maka mmetọ (sludge nkwụnye ego) ma dị ọcha Dabere na tooling usoro nwere ike etiti oge na-ebelata.
A na-etinye tankị ndị na-eme ka mmiri dị jụụ ngwa ngwa, ya mere etinye ya na osisi ọ bụla.
Nlereanya XYCF-25 XYCF-50 XYCF-75 XYCF-100 XYCF-200 NXZ-300 XYCF-400 NXZ-500
Enwere magnet na-adịgide adịgide (ferrite ma ọ bụ neodymium iron boron, ụdị 2 nke magnetik siri: 1000GS na 3000GS) n'ime magnetik drum. magnetik drum na-agbagharị site na moto. mgbe mmiri mmiri nwere magnetik ígwè dị nso na nso magnetik, ụda magnet nwere ike ikewapụ adịghị ọcha magnet. Mgbe adịghị ọcha na-eso magnetik drum na elu akụkụ, roba ala afanyekwa mmiri mmiri azụ. Mgbe ihe ndọta ahụ na-eme ka adịghị ọcha na-acha ọcha, ihe nchacha ahụ na-ewepụsị adịghị ọcha dị na magnet. The magnetik separator na-bụ-eji maka ọcha nke obi jụrụ (ịcha ọmụmụ ma ọ bụ emulsion) nke-egweri igwe na ndị ọzọ igwe ngwaọrụ. Iji magnetik separators nwere ike belata ọnụ ọgụgụ nke egweri wheel mgbazi, melite elu imecha nke workpiece, ogologo ọrụ ndụ nke-egweri wheel na jụrụ ọmụmụ, belata oru osisi ike nke ndị ọrụ na-ebelata mmetọ nke jụrụ mmiri mmiri na gburugburu ebe obibi. Magnetik separator ike ga-eji naanị, na nwekwara ike-eji na njikọ na akwụkwọ gbalaga nyo, mgbawa Cleaner na vortex separator aka na filtration mmetụta.
Magnetik separator nwere ike nkewa n'ime ndị na-esonụ dị ka usoro eruba: XYCF-25, XYCF-75, XYCF-100, XYCF-200, XYCF-300, XYCF-400, XYCF-500.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ịhọrọ ụdị nke dabere na ọnụọgụ coolant dị mkpa na saịtị ahụ. Isi ihe ị ga-atụle n'ịhọrọ ụdị ahụ gụnyere: usoro usoro, nrịgo elu nke magnetik separator na oghere ntinye na saịtị ahụ. Oghere nke magnetik na-edozi ya bụ 4-9.
A pụkwara ikewapụta magnetik n'ime igwe arụnyere n'ime ya, ọkara magnetik maka magnetik drum na magnetik drum n'agagharị, mana enweghị ntụgharị maka ndọta.
Nke gara aga: Eriri belt (mgbabere uzo ígwè, yinye belt)
Osote: Metal mgbawa shredder